မြကျွန်းသာမိုးကုတ်ရိပ်သာ | Mya Kyun Thar isanewly founded Meditation Centre headed by Venerable Dr. Ashin Parami. It is situated in the Yadanarkyun Ward, Thunandar Road, North Okkala, Yangon, Myanmar. It follows the technique of Mogoke Sayadaw Phayargyi, an eminent meditation master in 1960s. | Page 19
၀ဋ်သုံးပါးဟူသည် ကိလေသ၀ဋ်၊ ကမ္မ၀ဋ်၊ ၀ိပါက၀ဋ်တို့ဖြစ်၏။ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်စက်ဝိုင်းတွင် အ၀ိဇ္ဇာ၊ တဏှာ၊ ဥပါဒါန်(၃)ပါးကိုလည်းကောင်း၊ သင်္ခါရ၊ ကမ္မဘ၀(၂)ပါးကိုလည်းကောင်း ကြိုးနီဖြင့်ဝိုင်းပြထား၏။ အ၀ိဇ္ဇာ၊ တဏှာ၊ ဥပါဒါန်(၃)ပါးသည် ကိလေသ၀ဋ်ဖြစ်၏။ သင်္ခါရနှင့် ကမ္မဘ၀(၂)ပါးသည် ကမ္မ၀ဋ်ဖြစ်၏။ ကျန်သည့် ၀ိညာဏ် နာမ်ရုပ် သဠာယတန ဖဿ ဝေဒနာ ဇာတိ ဇရာမရဏ ဥပပတ္တိဘ၀ (၈)ပါးသည် ၀ိပါက၀ဋ်ဖြစ်၏။ ၀ဋ်ဟူသည် လည်ခြင်းဟု အဓိပ္ပါယ်ရ၏။ သံသရာကို ထိုဝဋ်သုံးပါးက လှည့်နေသဖြင့် လည်နေရခြင်းသဘောဖြစ်၏။ အ၀ိဇ္ဇာနှင့် တဏှာကြောင့် ခန္ဓာရရှိခဲ့ပုံကို မနေ့က ပြောခဲ့၏။ ထိုအ၀ိဇ္ဇာ တဏှာတို့သည် ကိလေသ၀ဋ်ပင်ဖြစ်၏။ အ၀ိဇ္ဇာက မသိအောင်ဖုံး၊ တဏှာက ဘုံဘ၀ကို ခင်မင်သဖြင့် သတ္တ၀ါတိုင်းသည် ကိုယ့်ဘ၀ကိုယ် ခင်မင်တွယ်တာနေကြသည်သာဖြစ်၏။ မည်မျှဆိုးသည့်ဘ၀ပင် ဖြစ်နေစေကာမူ ကိုယ့်ဘ၀ကိုယ်တော့ ခင်မင်နေကြ၏။ ဆင်းရဲသားကလည်း ဆင်းရဲသားဘ၀အလိုက် ပြုံးပျော်နေကြ၏။ လူလတ်တန်းစားကလည်း […]
အ၀ိဇ္ဇာ တဏှာကြောင့် ခန္ဓာရဟူသည်
ခန္ဓာ့လက်သည်တရားခံ ရှာကြည့်တော့ အ၀ိဇ္ဇာနှင့် တဏှာကို တွေ့ရ၏။ အ၀ိဇ္ဇာ တဏှာကြောင့် လက်ရှိခန္ဓာကြီးရထားသဖြင့် ထိုအ၀ိဇ္ဇာ တဏှာမပြုတ်သေးသရွေ့ကာလပတ်လုံး အလားတူ ခန္ဓာတွေ ထပ်တလဲလဲ ရနေဦးမည်သာဖြစ်၏။ ခန္ဓာရှိနေ၍ ပူမှု အိုက်မှု အေးမှု ချမ်းမှု ဆာလောင်မွတ်သိပ်မှု မကျန်းမာမှု အိုမှု နာမှု သေမှု အမျိုးမျိုးသောဒုက္ခတို့ကို ခံစားနေရခြင်းဖြစ်၏။ သောက ပရိဒေ၀ ဒုက္ခ ဒေါမနဿ စသည့် စိတ်မချမ်းသာမှုတွေကိုလည်း ရှောင်လွှဲ၍ မရ။ ထိုဒုက္ခမှန်သမျှသည် ခန္ဓာမရှိမှ အေးငြိမ်းမည်ဖြစ်၍ ခန္ဓာမရှိသည့် နိဗ္ဗာန်၊ ဒုက္ခခပ်သိမ်းအေးငြိမ်းသည့် နိဗ္ဗာန်ကို လိုချင် ရချင်လျှင် ၀ိပဿနာအလုပ် အားထုတ်ကြရမည်ဖြစ်၏။ အ၀ိဇ္ဇာသည် သစ္စာကိုမသိ။ လက်ရှိခန္ဓာ ဒုက္ခသစ္စာဟူသည်ကို အ၀ိဇ္ဇာက မသိအောင်ဖုံးထားလိုက်၏။ ခန္ဓာကြီးက နှိပ်စက်နေသည်ကို ဉာဏ်ဖြင့်လည်းမကြည့် သတိလည်းမထားတော့ သိခွင့်မရ။ တကယ် မြင်အောင်ကြည့်လိုက်ပါက ဒုက္ခကို အထင်းသား […]
﻿﻿﻿﻿ ပရိညာသုံးဆင့်ဟူသည် ဉာတပရိညာ၊ တီရဏပရိညာ၊ ပဟာနပရိညာဟူ၍ဖြစ်၏။ ပါဠိလိုပြောခြင်းဖြစ်၍ တစ်မျိုးတဖုံထူးဆန်းနေနိုင်၏။ ဉာတပရိညာဟူသည် အသိဖြင့် ဒိဋ္ဌိကိလေသာကို ပယ်ခွါခြင်းဖြစ်၏။ တီရဏပရိညာဟူသည် အကျင့်ဖြင့် ဒိဋ္ဌိကိလေသာကို ပယ်ခွါခြင်းဖြစ်၏။ ပဟာနပရိညာဟူသည် လောကုတ္တရာမဂ်ဖြင့် ဒိဋ္ဌိကိလေသာကို ပယ်ခွါခြင်းဖြစ်၏။ မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးက လွယ်ကူစွာနားလည်နိုင်ရန် ရံခါ “သိကွာ၊ ကျင့်ကွာ၊ ပယ်ကွာ”ဟု သုံးလေ့ရှိ၏။ ရံခါ “သိပြုတ်၊ ပွားပြုတ်၊ ပယ်ပြုတ်”ဟု သုံးလေ့ရှိ၏။ ရံခါ “အသိဉာဏ်၊ အပွားဉာဏ်၊ အပယ်ဉာဏ်”ဟုလည်း သုံးလေ့ရှိ၏။ အပွားနှင့် အကျင့်သည် အဓိပ္ပါယ်တူမြန်မာစကားဖြစ်၏။ ပယ်ဟူသည် ပယ်ခွါမှုကို ဆိုလို၏။ ( -ါ) ရေးချမပါ။ အပါယ်လေးဘုံကိုညွှန်းသည့် စကားလုံးမဟုတ်၊ ထိုစကားလုံး၌ ( -ါ) ရေးချ ပါ၏။ ထို့ကြောင့် “ပယ်ပြုတ်”ဟူသည် သက္ကာယဒိဋ္ဌိကို အမြစ်ပြတ် ပယ်သတ်သောအားဖြင့် ပြုတ်သည်ကို ရည်ညွှန်း၏။ သက္ကာယဒိဋ္ဌိကို […]
အရင်နေ့က ဒိဋ္ဌိဝိပ္ပလ္လာသတရားလေးပါးကို ပြောခဲ့ပါ၏။ ဒိဋ္ဌိဝိပ္ပလ္လာသနှင့် သက္ကာယဒိဋ္ဌိသည် အတူတူပင်ဖြစ်၏။ ခန္ဓာငါးပါး ငါထင် သူထင် ယောက်ျားထင် မိန်းမထင် ပုဂ္ဂိုလ် သတ္တ၀ါထင်မြင်နေခြင်းပင်ဖြစ်၏။ ရံခါ အတ္တဒိဋ္ဌိဟုလည်း ခေါ်လေ့ရှိ၏။ မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဟုလည်း ရံခါ ပြင်းထန်စွာသုံးလေ့ရှိသေး၏။ စင်စစ်မှာ ဒိဋ္ဌိမှန်သမျှသည် အမှတ်မှား အသိမှား အယူမှားကြောင့်သာ ဖြစ်ရခြင်းဖြစ်၏။ ထိုဒိဋ္ဌိကို ပထမ အသိဖြင့်ဖြုတ်၊ ဒုတိယအပွားဖြင့်ဖြုတ်၊ တတိယအပယ်ဖြင့်ဖြုတ်လိုက်နိုင်လျှင် အပါယ်လေးပါ တံခါးပိတ်ပြီဖြစ်၏။ ပယ်ပြုတ်ပြုတ်လျှင်တော့ “သေတောင် ဆွမ်းမသွပ်နဲ့တော့”ဟု မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး မိန့်တော်မူ၏။ မှန်ပါ၏။ ဒိဋ္ဌိတန်းလန်းနှင့်သေသွားလျှင် လားရာဂတိ စိတ်မချရသောကြောင့်သာ ဆွမ်းသွတ်ကြရခြင်းဖြစ်၏။ သက်ပျောက်ဆွမ်း၊ ရက်လည် လလည် နှစ်လည်ဆွမ်းများ သွပ်နေကြရခြင်းဖြစ်၏။ ဒိဋ္ဌိပြုတ်လျှင်မူ ဂတိမြဲသွားပြီဖြစ်သဖြင့် ဆွမ်းသွပ်ရန်ပင် မလိုအပ်တော့။ သေခါနီး လားရာဂတိလွဲမှာကြောက်စရာအကောင်းဆုံးဖြစ်၏။ ငရဲ တိရစ္ဆာန် ပြိတ္တာ အသူရကာယ် အပါယ်လေးဘုံ ရောက်မည့်ဘေးကြီးသည် အဆိုးဆုံး […]
ရဟန်းတစ်ပါးက ဘုရားရှင်အား သက္ကာယဒိဋ္ဌိပယ်ပုံဟောပေးတော်မူပါဟု လျှောက်ထားသောကြောင့် ဘုရားရှင်က အကျဉ်းမျှ ဟောတော်မူလိုက်၏။ “၀ိညာဏံ အနိစ္စတော ဇာနတော ပဿတော သက္ကာယဒိဋ္ဌိ ပဟီယတိ”။ လောဘစိတ်ပေါ်လျှင် လောဘစိတ်ရှု၊ ဒေါသစိတ်ပေါ်လျှင် ဒေါသစိတ်ရှု၊ မောဟစိတ်ပေါ်လျှင် မောဟစိတ်ရှု၊ ကုသိုလ်စိတ်ပေါ်လျှင် ကုသိုလ်စိတ်ရှု၊ ပေါ်လာသည့်စိတ်မှန်သမျှ အကုန်ရှု။ ပုထုဇဉ်သန္တာန်တွင် ပုထုဇဉ်စိတ်သာ ပေါ်မည်ဖြစ်၏။ ပေါ်သမျှစိတ်ကို ရှု၍ ဖြစ်ပျက်မြင်လျှင် သက္ကာယဒိဋ္ဌိပယ်၏ဟု ဟောတော်မူရင်းဖြစ်၏။ သစ္စာနုလောမိကဉာဏ်ဖြင့် ပေါ်လာသမျှစိတ်တွေကို ဖြစ်ပျက်မြင်အောင် ရှုလျှင် သက္ကာယဒိဋ္ဌိပယ်နိုင်၏။ ထို့အတူ ဝေဒနာရှု၍ ဖြစ်ပျက်မြင်လျှင်လည်း သက္ကာယဒိဋ္ဌိပယ်သည်သာဖြစ်၏။ စိတ်ကိုရှု၍ ဖြစ်ပျက်မြင်လျှင် ဒိဋ္ဌိဝိပလ္လာသတရား လေးပါးပယ်ကွာသွားတော့၏။ ဒိဋ္ဌိဝိပ္ပလ္လာသတရားလေးပါးမှာ အနိစ္စကို နိစ္စဟု အယူမှား၊ ဒုက္ခကို သုခဟုအယူမှား၊ အနတ္တကို အတ္တဟု အယူမှား၊ အသုဘကို သုဘဟု အယူမှားအားဖြင့် အယူမှားလေးချက်ပင်ဖြစ်၏။ ဒိဋ္ဌိအမြန်ပြုတ်ချင်လျှင် စိတ်ကို ရှုရ၏။ […]
ဝေဒနာသည် ကိုယ်ပေါ်၌ နှစ်မျိုး ၀မ်းထဲ၌ သုံးမျိုးပေါ်နိုင်သည်ကို အရင်နေ့က ပြောပြခဲ့ပါ၏။ သူပေါ်သည့်နေရာသိမှ သူပျက်သည့်နေရာကို သိမည်ဖြစ်၏။ ဝေဒနာတစ်မျိုးမျိုးပေါ်လျှင် ပေါ်သည့်နေရာ၌ စူးစူးစိုက်စိုက် ရှုနိုင်ရန်အတွက် ပေါ်ရာဌာနတို့ကို ပြောပြရခြင်းဖြစ်၏။ “တစ်ခြားမရွှေ့နဲ့၊ ၀ိပဿနာရှုတော့ ဒီနေရာ စိုက်ကနဲ့ စိုက်နဲ့ သွားအောင်လုပ်ရမယ်” ဟု မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမိန့်တော်မူ၏။ ပေါ်သည့်နေရာတွင် ဉာဏ်စိုက်ရမည်ဖြစ်၏။ ပေါ်ရာဌာနကိုသိမှ စောင့်ပြီး မိအောင် ဖမ်းနိုင်မည်ဖြစ်၏။ မျက်စိက မြင်ရုံသာမြင်နိုင်၏။ သဘောကျသည်က ၀မ်းထဲက ဖြစ်၏။ သဘောမကျသည်ကလည်း ၀မ်းထဲကသာ ဖြစ်၏။ လျစ်လျူရှုသည်ကလည်း ၀မ်းထဲကသာ ဖြစ်၏။ မျက်စိက မြင်ကာမတ္တ မြင်စိတ်ကလေးကို ဥပေက္ခာဝေဒနာဟု ဆိုရ၏။ ထို့အတူ ကြားစိတ်၊ နံစိတ်၊ စားစိတ်လျက်စိတ်တို့သည် ဥပေက္ခာဝေဒနာပင်ဖြစ်၏။ ထို မျက်စိ နား နှာခေါင်း လျှာ လေးမျိုးကို ဥပေက္ခာသာ ပေါ်နိုင်သည့် လေးဌာနဟုမှတ်လိုက်ပါ။ […]
နိဗ္ဗာန်ရဖို့ အနီးဆုံးသည် ဝေဒနာနုပဿနာပင် ဖြစ်၏။ ဝေဒနာကြောင့် တဏှာဖြစ်ရ၏ (ဝေဒနာပစ္စယာ တဏှာ)။ ဝေဒနာချုပ်လျှင် တဏှာချုပ်တော့၏ (ဝေဒနာနိရောဓာ တဏှာနိရောဓော)။ တဏှာချုပ်ခြင်းသည် နိဗ္ဗာန်ပင်ဖြစ်၏ (တဏှာနိရောဓော နိဗ္ဗာနံ)။ ထိုဟောကြားတော်မူချက်တို့အရ ဝေဒနာကိုသိမှ ဝေဒနာနိရောဓ ကိုသိမည်ဖြစ်၏။ ဝေဒနာကို မသိလျှင် ဝေဒနာနိရောဓကိုမသိ။ ဆိုလိုသည်မှာ ဝေဒနာဖြစ်ခြင်းသိမှ ဝေဒနာချုပ်ခြင်းသိမည်ဖြစ်၏။ ဝေဒနာသိဖို့အရေးအတွက် ဝေဒနာပေါ်ရာဌာနတို့ကို ပြောခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါ၏။ ယခုတစ်ဖန် ဝေဒနာသုံးမျိုး ပေါ်ပုံကို အကျဉ်းမျှ ထပ်မံပြောပြလိုပါ၏။ ခန္ဓာကိုယ်တစ်ကိုယ်လုံးမှာ ခြေသည်းလက်သည်း ဆံဖျားစသည့် ကာယပသာဒမဖြစ်နိုင်သည့်နေရာများမှအပ ကျန်သည့်နေရာတို့၌ ရံခါ သုခဝေဒနာပေါ်၏၊ ရံခါ ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်၏။ ထို့ကြောင့် ကိုယ်ပေါ်၌ သုခနှင့် ဒုက္ခ ဝေဒနာနှစ်မျိုးပေါ်နိုင်၏။ တစ်ကိုယ်လုံးဟူသည် ပေါ်နိုင်ရာဌာနကိုသာ ပြောခြင်းဖြစ်ပါ၏။ စင်စစ်မှာ ပေါ်ချင်သည့်နေရာတွင် ကွက်၍ ပေါ်မည်သာ ဖြစ်၏။ သို့သော် တစ်နေရာရာတွင်သာ ထူးထူးခြားခြား […]